ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ မြဝတီ- ကောကရိတ် အာရှလမ်း ကော့နွဲ့ရွာ အနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ စူးရှထက် – Shwe Likes
ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ မြဝတီ- ကောကရိတ် အာရှလမ်း ကော့နွဲ့ရွာ အနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ စူးရှထက်
အနုပ ညာနယ် ပယ်မှာေနရာ တစ်ခုကို ရပ်တည် ထားပြီး အကောင်းဆုံးေ လျှာက်လှမ်းေ နတဲ့ မော်လ် ဒယ် စူးရှထ က်ကတော့ ပရိသတ်ေ တွရဲ့ ချစ်ခ င်မှုတွေကိုလည်း အပြည့် အဝရရှိထား ခဲ့ပါတ ယ်။
စူးရှထက် ဟာ နွေဦးတော်လှ န်ရေး ကာလမှာ လည်း ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်သားတ ည်းရပ်တ ည်ခဲ့သလို ပရဟိတလုပ်င န်းတွေ လည်း အား တက် သရော လုပ်ဆော င်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရှာေ ဖွ စုဆော င်းထားတဲ့ ချွေးနှဲ စာလေးတွေနဲ့ ဆ င်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ပြည်သူတွေကို တ တ်နိုင် သလောက် အလှူအတန်းတွေ အမြဲပြုလု ပ်လှူဒါန်းေ ပးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာ တရားလည်း ကိုင်းရှိုင်း သူဖြစ်သလို မိဘကိုလည်း ကျွေးမွေးပြု စုစောင့်ရှောက်နေတာေ ကြာင့် ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်လေး စားနေ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ စူးရှထက်က ထိတ်လန့်စရာ ဖြစ်ရပ်လေး ကြုံခဲ့ရတာကို ဖော်ပြလာတာေ တွ့ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ် ကတော့ ယနေ့မနက်ပိုင်း မြဝတီ – ကော့ကရိတ် အာရှ လမ်း ကော့နွဲ့ရွာအနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ယာယီပိတ် ထားခဲ့တဲ့ ခရီးသွားယာဉ်တွေ ထဲမှာ စူးရှထ က်တို့လည်း ပါဝင် ပိတ်မိ သွားခဲ့ပါတယ်။
စူးရှထက်ရဲ့ လူမှုကွ န်ယက်မှာတော့ “အာရှလမ်းေကာ့ကရိတ် အထွက် တိုက်ပွဲဖြစ်တာ…. အိုးးးလက်နက်ကြီးတွေကျတာ လေဗွေတွေပါမြင်နေရတယ်….အုန်း အုန်း အုန်းနဲ့ ပိတ်မိ ” ဆိုပြီး သူမကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုတွေ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Source – Zar Chi Htay
အႏုပ ညာနယ္ ပယ္မွာေနရာ တစ္ခုကို ရပ္တည္ ထားၿပီး အေကာင္းဆုံးေ လၽွာက္လွမ္းေ နတဲ့ ေမာ္လ္ ဒယ္ စူးရွထ က္ကေတာ့ ပရိသတ္ေ တြရဲ့ ခ်စ္ခ င္မႈေတြကိုလည္း အျပည့္ အဝရရွိထား ခဲ့ပါတ ယ္။
စူးရွထက္ ဟာ ေႏြဦးေတာ္လွ န္ေရး ကာလမွာ လည္း ျပည္သူေတြ နဲ႔အတူ တစ္သားတ ည္းရပ္တ ည္ခဲ့သလို ပရဟိတလုပ္င န္းေတြ လည္း အား တက္ သေရာ လုပ္ေဆာ င္ေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမရွာေ ဖြ စုေဆာ င္းထားတဲ့ ေခၽြးႏွဲ စာေလးေတြနဲ႔ ဆ င္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ျပည္သူေတြကို တ တ္နိုင္ သေလာက္ အလႉအတန္းေတြ အျမဲျပဳလု ပ္လႉဒါန္းေ ပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာသာ တရားလည္း ကိုင္းရွိုင္း သူျဖစ္သလို မိဘကိုလည္း ေကၽြးေမြးျပဳ စုေစာင့္ေရွာက္ေနတာေ ၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြက ခ်စ္ခင္ေလး စားေန ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ စူးရွထက္က ထိတ္လန႔္စရာ ျဖစ္ရပ္ေလး ၾကဳံခဲ့ရတာကို ေဖာ္ျပလာတာေ တြ႕ရပါတယ္။
ဒီျဖစ္ရပ္ ကေတာ့ ယေန႔မနက္ပိုင္း ျမဝတီ – ေကာ့ကရိတ္ အာရွ လမ္း ေကာ့ႏြဲ႕ရြာအနီးမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ယာယီပိတ္ ထားခဲ့တဲ့ ခရီးသြားယာဥ္ေတြ ထဲမွာ စူးရွထ က္တို႔လည္း ပါဝင္ ပိတ္မိ သြားခဲ့ပါတယ္။
စူးရွထက္ရဲ့ လူမႈကြ န္ယက္မွာေတာ့ “အာရွလမ္းေကာ့ကရိတ္ အထြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္တာ…. အိုးးးလက္နက္ႀကီးေတြက်တာ ေလေဗြေတြပါျမင္ေနရတယ္….အုန္း အုန္း အုန္းနဲ႔ ပိတ္မိ ” ဆိုၿပီး သူမၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတာကိုေတြ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Source – Zar Chi Htay
ပရိတ်သတ်တွေ သိချင်နေတဲ့ ဇေ သားအဖ ဖမ်းဆီးခံ လိုက်ရ တဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း
အရင်လိုအနုပညာ အလုပ်တွေပြန်လု ပ်တော့မယ့်သူ့ကို သူများနည်း တူအားပေးကြဖို့ ပရိသတ်ကြီးကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အဆိုတော်ရွှေထူး